IShanghai International Resort: iminyaka emihlanu, $ 5 billion, izivakashi eziyizigidi ezingama-6.16
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Theme Parks » IShanghai International Resort: iminyaka emihlanu, $ 5 billion, izivakashi eziyizigidi ezingama-6.16
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-China Breaking News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Shopping • Theme Parks • Ezokuvakasha • Inkulumo Yezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
IShanghai International Resort ibika ngaphezulu kwama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-40 emalini engenayo yezokuvakasha eminyakeni emihlanu
IShanghai International Resort yamukele izivakashi ezingaphezu kwezigidi ezingama-83 kusukela ngo-2016
Indawo yokungcebeleka iqophe cishe izivakashi eziyizigidi eziyi-14.09 ngo-2020
Indawo yokungcebeleka ihlela ukwenza imicimbi ebalelwa ku-150 kulo nyaka
IShanghai International Resort ibike ukuthi isizuze imali engaphezulu kwezigidigidi ezingama-40 zama-yuan (cishe amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisithupha namashumi ayisithupha nesithupha) emalini yezokuvakasha selokhu yavulelwa umphakathi eminyakeni emihlanu eyedlule ngo-6.16.
Ngokusho kokuphathwa kwezokungcebeleka, ikhaya le IShanghai Disneyland ibone izivakashi ezingaphezu kwezigidi ezingama-83 selokhu yavulwa ngo-2016.
Yize kube nomthelela wokuqubuka kokuqubuka kwe-COVID-19, indawo yokubhuka yaqopha cishe izivakashi eziyizigidi eziyi-14.09 ngo-2020, cishe amaphesenti angama-80 ezivakashi ezigeleza ngonyaka owedlule, zathola cishe ama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-7.
Indawo yokungcebeleka ihlela ukwenza imicimbi ebalelwa ku-150 kulo nyaka, kubandakanya nomkhosi we-lavender nesonto lamafilimu. IShanghai International Music Village, etholakala kule ndawo, kulindeleke ukuthi iqale ukusebenza.
U-El Al uphinde wethula indiza iBudapest eya eTel Aviv
Imali engenayo yaseHawaii ekhula ngesikhathi sokuqoshwa kwe-COVID-19 ...
Ukuphathwa okungafanele kwe-COVID kungakhuphula igciwane ...